Maxay ahayd sababtii uu Bruno Fernandes rigoorada u siiyey Rashford, xilli xiddiga reer Portugal uu saddexleey dhalin karay kulankii xalay? – Gool FM
Maxay ahayd sababtii uu Bruno Fernandes rigoorada u siiyey Rashford, xilli xiddiga reer Portugal uu saddexleey dhalin karay kulankii xalay?
(Manchester) 25 Nof 2020. Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Manchester United, Bruno Fernandes ayaa helay fursad uu ku dhalin karay saddexleey kulankii xalay ay guusha ka gaareen Istanbul Basaksehir.
Kulankan laacibka reer Portugal ee Fernandes ayaa labo gool dhaliyey kulankan, kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaana heshay gool ku laad ama rigoore, haddii uu qaadan lahaa Bruno dabcan waxa ay noqon lahayd inuu saddexleey saxiixay kulankan.
Yeelkeede, taas bedelkeeda waxaa uu Bruno rigooradaas ku wareejiyey Rashford oo tuuray goolna u bedelay, waxaana laacibka khadka dhexe ee Man United Fernandes uu shaaca ka qaaday kulanka kaddib in mar hore uu sii degsanaa qorshahaas, isla markaana uu fuliyey ballanqaad hore.
Man United ayaa kulankan 4-1 kaga adkaatay Istanbul Basaksehir oo ay ku soo dhoweeyeen garoonkooda, waxaana labo ka mid ah goolashaas dhaliyey Bruno Fernandes, labada gool kalena waxaa kala dhaliyey Rashford iyo James.
“Dabcan ciyaaryahan waliba waxa uu doonayaa inuu saddexleey dhaliyo, waad ogtahay” ayuu Fernandes u sheegay BT Sport.
“Laakiin kaddib kulankii aan la ciyaarnay West Brom ee Premier League, waxaan us heegay Rashy inuu qaadan doono rigoorada xigta, taas ayaana xusuustay.
“Sidoo kale Rashy waa mid ka mid ah gooldhaliyeyaasha ugu sarreeya Champions League, sidaasi darteed waxaan u malaynayaa inay muhiim u ahayd inuu helo kalsooni.
“Waxaan dhihi karaa, micno malahan cidda tuureysa ama laadeysa rigooreyaasha, tan ugu muhiimsan ayaa ah in la dhaliyo, haddii ay kooxdu dhaliso anaga sidoo kale waan dhaliyey” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Fernandes.
Si kastaba ha noqotee Fernandes ayay ku qaadatay kaliya 20 daqiiqo inuu dhaliyo labo gool kulankan, waxaana goolka saddexaad oo rigoore ahaa ku daray Rashford qeybtii hore ee ciyaarta.
Deniz Turuc ayaana laad xor ah ugu shubay Man United, laakiin kooxda martida loo ahaa goolashadeeda waxaa sii dheereeyey Daniel James oo goolka afaraad dhaliyey waqtigii dhimashada ee ciyaarta.
Guushaan ay gaartay Man United ayaa ka dhigan inay saddex dhibcood oo nadiif ah ku hoggaaminayso Guruubkeeda H ee Champions League, waxaana ay u baahan tahay hal dhibic si ay ugu soo gudubto 16-ka Champions League, iyadoo ay u harsan yihiin labo kulan.
Ronald Koeman oo u sheegay Macallinka Kooxda Dynamo Kyiv muddada uu garoommada ka maqnaan doono Gerard Pique
RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday liiska Musharraxiinta ku tartamaya Laacibka, Tababaraha, Goolhayaha & Goolkii ugu fiicnaa sanadkan 2020 ee FIFA THE BEST